St Helena waxay xustaa Bicentenary of Napoleon 5 May 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » St Helena waxay xustaa Bicentenary of Napoleon 5 May 2021
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Napoleon wuxuu ku noolaa St Helena ilaa uu ka dhintey 1821 isagoo 51 jir ah
St Helena waa jasiiradda labaad ee ugu fog adduunka
Napoleon waxaa loo masaafuriyey St Helena 1815 kadib guuldaradii ka soo gaadhay Dagaalkii Waterloo
Napoleon waxaa la keenay St Helena bishii Oktoobar 1815 wuxuuna ku hoyday Longwood, halkaas oo uu ku dhintay May 1821
5-ta Meey, 2021-ka waxay xusaysaa laba-geesoodka dhimashada Napoleon Bonaparte - oo ah taariikh muhiim ah St Helena, waa jasiiradda labaad ee ugu fog adduunka, oo ku taal bartamaha Badweynta Koonfurta Badweynta Atlantik. Markii loo masaafuriyey St Helena 1815 ka dib guuldaradii ka soo gaadhay Dagaalkii Waterloo, jeneraalkii guud ee millatariga iyo imbaraadoorihii Faransiiska, Napoleon wuxuu ku noolaa jasiiradda ilaa uu ku dhintey 1821 isagoo 51 jir ah.
Sannadkii 1815-kii ayay dawladda Ingiriisku xushay St Helena, Territory Dibadeed oo Ingiriis ah, oo ah meeshii lagu qabtay Napoleon I ee Faransiiska. Waxaa loo keenay jasiiradda Oktoobar 1815 wuxuuna hoyday Longwood, halkaas oo uu ku dhintay May 1821. Waxay ku qaadatay toban toddobaad HMS Bellerophon inuu yimaado jasiiradda Koonfurta Atlaantik isla markiiba way caddaatay goor hore in rajo kasta oo baxsad ah - halkaasna ahaayeen qorshooyin - aad bay u caato noqon lahaayeen.
Inta lagu jiro muddadan, jasiiradda waxaa si xoog leh u ilaalinayay ciidammo Ingiriis oo caadi ah, ciidammada maxalliga ah ee St Helena, iyo maraakiibta badda. Ingiriisku wuxuu haystay Napoleon oo si joogto ah u ilaalinayay aragtida doonni ku soo dhowaatayna waxay u jeedinaysaa ilaa 500 oo qori in la diyaariyo. Caddaynta ayaa weli taagan maanta deyrka jasiiradda si loo hubiyo in Napoleon uusan baxsan.
Barnaamijka xuska wuxuu ka bilaaban doonaa Napoleon meeshii ugu dambeysay oo uu ku nasto ee ku taal barxada quruxda badan ee Longwood House waqtiga saxda ah ee geeridiisa 5 Meey 17.15. Xafladda ayaa ka koobnaan doonta aqrin iyo muusig iyo hoos u dhigista calanka Faransiiska oo hoos loo dhigayo.
Sagaalka subaxnimo markay tahay May 9, 6, waxaa jiri doona Masaajid Katoolik ah oo sidoo kale lagu qaban doono Longwood House kadibna waxaa xigi doona xaflad ka socota Napoleon's Tomb 2021am. On 10.45 May, waxaa jiri doona xaflad labaad oo ka dhici doonta Qabriga iyo Longwood House ayaa loo furi doonaa dadweynaha si ay u soo booqdaan bandhigga musaafurinta Napoleon.
St Helena waxay ka duwan tahay meel kasta oo kale oo adduunka ah, waana shaki la'aan inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu caansan, xiisaha iyo abaalmarinta leh ee la booqdo. Jasiiraddan fulkaanaha fog waxay ku sii jirtaa COVID-19 bilaash inta lagu jiro aafada adduunka oo hadda waxay u fureysaa soohdimaheeda martida marka sharciyada Ingiriisku oggolaadaan. Jasiiraddu waxay ku dheehan tahay taariikh qani ah, waxay ku faantaa dhowr socod oo xiiso leh oo ku kala yaal dhul kala duwan oo dhib badan, waxay hoy u tahay shimbiraha, xiddiglayaasha, noocyada kala duwan, badmaaxiinta iyo kalluumeysatada isboortiga - waxayna hoy u tahay doolfaanno deggan oo si joogto ah uga soo muuqda xeebta ku teedsan caasimada Jamestown.